खाना हातले खानु राम्रो कि चम्चाले ? - Kaiphiyat
काठमाडौं । हाम्रो देशको सहरी भेगका अधिकांश व्यक्तिहरू हातले खाना खान मन पराउँछन् । पलेँटी कसेर काठको पिर्कामा बसेर हातले खाना खाने हाम्रो पुरानो संस्कार हो ।
तर बिस्तारै खाना खानको लागि चम्चाको प्रयोग गर्न थालियो । तर के छ हातले खाना खानुपछिको विज्ञान ? पूर्वीय शास्त्र भन्छ ‘हाम्रो शरीर पाँच तत्व मिलेर बनेको हुन्छ । जसलाई जीवन ऊर्जा पनि भनिन्छ । यी पाँच तत्वहरू हाम्रो हातमा हुन्छन्, यी पाँचमध्ये कुनै पनि तत्वमा हुने असन्तुलनले मान्छे बिरामी हुनसक्छ । हातले खाना खाँदा यही सन्तुलनले शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ भन्ने मान्यता छ ।
तसर्थ, जब हामी खाना खान्छौं हामी यही पञ्च तत्वलाई सन्तुलित गराउने गर्छाैं । जसका कारण खाना अधिक ऊर्जावान हुन्छ र यसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ । हातले खाना खाँदा के–के हुन्छ फाइदा ?
खानाको स्पर्श गर्नु नै हाम्रो शरीरको पाचन प्रणालीको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो, हामीले हातले खाना छुन्छौं त्यो जानकारी खाना मुखमा जानु पहिले नै दिमागमा पुगेको हुन्छ । चेतन दिमागले त्यो सूचना पेटसम्म पुर्‍याउँछ ।
यो सूचनासँगै पेट खाना पचाउनको लागि तयार भएर बस्छ । यसले पाचन प्रणालीमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।
माथि उल्लेख गरिए जस्तै जब हामी खाना खान्छौं हातले स्पर्श गरेसँगै हाम्रो खाना मुखमा जानेवाला छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसलाई माइन्डफुल खाना भन्ने चलन छ । यसरी हातले खाना खाँदा खानामा पोषक तत्वको मात्रा समेत वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
समग्रमा हातले खाना खाँदा खानामा पोषण तत्वको वृद्धि हुने, पाचन सुधार गर्छ र समग्रमा हामीलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ ।
जिभ्रो पोल्ने सम्भावना कम हुन्छ
हातले खाना खानुको फाइदाहरूमध्ये एक भनेको यसले हाम्रो जिब्रो जलाउँदैन । जब तपाईं आफ्नो हातले खाना उठाउनुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि तपाईं कति खाना खान लाग्नु भएको छ । यदि खाना धेरै तातो छ भने तपाईंलाई थाहा हुन्छ र त्यसलाई जिभ्रोमा लैजानुहुन्न । यसरी जिभ्रोलाई तातोबाट चाउनको लागि पनि चम्चाभन्दा हातले खाना खानु उपयुक्त हुन्छ ।
Previous: प्रियंका भाउजुको बच्चाको आवाज सुन्दै देवर
Next: वीर्य दानबाट जन्मिएकी युवतिले भेटाइन आफ्ना ६३ भाइ बहिनी